Nagu saabsan - Shenzhen Eyin Technology Co., Ltd.
Shenzhen Eyin Technology co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2008, taasoo keentay wershad bar baar oo ku taal Shenzhen, Shiinaha. Waxaan haynaa in kabadan 100 shaqaale, kudhowaad 5000 mitir murabac oo wax soo saar ah.
Waxaan diirada saareynaa qaabeynta, hormarinta iyo soo saarida Sound bar, kuwa ku hadla warbaahinta badan iyo kuwa ku hadla yar. Badeecadaha kala duwan ee soosaarka RMS waxay ka socdaan 5W ilaa 200W iyo wixii ka sareeya. Wax soo saarkayagu waa CE, REACH ROHS, LVD & EMC, ERP, FCC, KC, BQB la aqoonsan yahay warshaddeenuna waa ISO iyo BSCI waa shahaado.
Waxaan leenahay aqoon isweydaarsi heer sare ah, dhammaan qalabyada horumarsan, kooxda xirfadlaha R & D, iyo nidaamka xakamaynta tayada wanaagsan si loo hubiyo tayada badeecadaha iyo keenista degdegga ah. Ka sokow, waxaan sii wadeynaa inaan soo saarno alaabadayada gaarka ah, moodada iyo tartamada, waxaa jiri doona 5 ama 6 qaabab cusub oo loogu talagalay suuqyada adduunka sannad kasta.
Tan iyo aasaaskii, waxaan had iyo jeer ku dhejinaa tayada iyo sumcadda booska ugu muhiimsan ee na hogaamin kara horay u socod. waxaan siinaa alaab tayo sare leh lamaanaheena. waxaan horey u soo saarnay xiriirka ganacsi ee saaxiibtinimo ee aan la leenahay macaamiisha Yurub, USA, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Afrika, bariga dhexe iyo Aasiya.
Waxaan si diiran u soo dhaweyneynaa dhammaan su'aalaha la weydiinayo ee dal iyo dibadba ah si ay noola shaqeeyaan, una sugno waraaqahaaga.
Karaoke Soundbar, Wifi Soundbar Wixii Tv, Tv Soundbars, Alexa Soundbar, Tv Iyo Soundbar Mount, Hadalka Wifi Soundbar,